Vaovao - fanoherana famonoana olona
Fanoherana fanoherana ny herisetra
Ny fanoherana ny herisetra dia manondro ny fahazoana nolovaina amin'ny biotype ny tsimparifary iray mba hiaina velona amin'ny fampiharana herisetra izay mora tohina ny mponina tany am-boalohany. Ny biotype dia vondron-java-maniry ao anaty karazana iray izay manana toetra biolojika (toy ny fanoherana famonoana poizina iray manokana) tsy fahita amin'ny mponina amin'ny ankapobeny.
Ny fanoherana ny herisetra dia mety olana lehibe tokoa atrehin'ireo mpamboly ao North Carolina. Manerana ny tany dia ahitra miisa 100 mahery ny ahitra izay fantatra fa mahatohitra famonoana herisetra iray na maromaro ampiasaina matetika. Any North Carolina, dia manana biotype an'ny gisa tsy mahazaka herisetra (Prowl, Sonalan, ary Treflan) isika, biotype an'ny cocklebur mahatohitra MSMA sy DSMA, ary biotype an'ny ryegrass isan-taona mahatohitra Hoelon.
Hatramin'izao dia tsy dia nisy ahiahy firy momba ny fampandrosoana ny fanoherana ny herisetra ao Carolina Avaratra. Na dia manana karazany telo miaraka amin'ny biotypes mahatohitra famonoana bibikely sasany aza izahay, ny fisehoan'ireto biotypes ireto dia nohazavaina mora tamin'ny fambolena vokatra amin'ny monokorona. Ireo mpamboly izay manodina vokatra dia tsy mila miahiahy momba ny fanoherana. Niova anefa ny toe-javatra tato anatin'izay taona lasa izay noho ny fivoarana sy ny fampiasàna fanafody famonoana poizina marobe izay manana fomba fiasa mitovy (Tabilao 15 sy 16). Ny mekanisma amin'ny hetsika dia manondro ny fizotrany manokana hamonoan'ny herisetra ny zavamaniry mora tohina. Ankehitriny, ny herisetra misy ny mekanisma fiasa mitovy amin'izany dia azo ampiasaina amin'ny voly maro izay azo ambolena amin'ny fihodinana. Ny tena mampanahy dia ireo famonoana ahitra manakana ny rafitra anzima ALS (Tabilao 15). Maro amin'ireo herisetra ampiasaintsika matetika no mpanakana ny ALS. Ho fanampin'izany, maro amin'ireo famonoana herisetra vaovao no antenaina hosoratana ao anatin'ny 5 taona ho avy dia mpanakana ny ALS. Amin'ny maha-vondrona azy, ny mpanohitra ALS dia manana toetra maromaro izay toa mahatonga azy ireo ho mora amin'ny fampandrosoana ny fanoherana ny zavamaniry.
Ny famonoana herisetra dia ampiasaina amin'ny famokarana voly fotsiny satria mahomby kokoa na toekarena kokoa noho ny fomba hafa amin'ny fifehezana ny ahidratsy. Raha toa ka mivoatra ny fanoherana famonoana poizina na fianakavian'ny herisetra, dia mety tsy hisy ny famonoana poizina mety hafa. Ohatra, tsy misy famonoana poizina hafa hifehezana ny felam-bolo mahazaka Hoelon. Noho izany, ny herisetra dia tokony heverina ho loharano arovana. Tokony hampiasa herisetra amin'ny fomba manakana ny fivoaran'ny fanoherana isika.
Ny fahatakarana ny fivoaran'ny fanoherana dia tena ilaina amin'ny fahazoana misoroka ny fanoherana. Misy fepetra roa ilaina amin'ny fivoaran'ny fanoherana herisetra. Voalohany, ny tsimparifary tsirairay manana fototarazo manome fanoherana dia tsy maintsy misy eo amin'ny mponina tompon-tany. Faharoa, ny tsindry fisafidianana vokatry ny fampiasana zava-mahadomelina lehibe izay mahazaka olona tsy fahita firy dia tsy maintsy apetraka amin'ny mponina. Ny olona mahatohitra, raha misy, dia mahaforona isan-jato ambany ny isan'ny mponina amin'ny ankapobeny. Matetika, ny olona mahatohitra dia eo amin'ny refes matetika manomboka amin'ny 1 amin'ny 100.000 ka hatramin'ny 1 amin'ny 100 tapitrisa. Raha toa ka ampiasaina tsy tapaka ny famonoana poizina na famonoana poizina miaraka amin'ny rafitra fiasa mitovy amin'izany, dia novonoina ireo olona mora tohina fa ny olona mahatohitra kosa dia tsy voa ary mamokatra voa. Raha mitohy mandritra ny taranaka maro ny tsindry fisafidianana, ny biotype mahatohitra amin'ny farany dia hahatratra isan-jaton'ny mponina. Amin'izay fotoana izay, ny fanaraha-maso ny ahitra azo ekena dia tsy azo intsony amin'ny famonoana poizina na herisetra.
Ny singa tokana manan-danja indrindra amin'ny paikady fitantanana mba hisorohana ny fivoaran'ny fanoherana ny herisetra dia ny fihodinan'ny herisetra izay manana fomba fiasa samihafa. Aza asiana ahidratsy ao amin'ny sokajy misy risika be amin'ireo voly roa misesy. Toy izany koa, aza manao fampiharana mihoatra ny roa amin'ireo herisetra mitera-doza ireo amin'ny vokatra mitovy. Aza asiana ahidratsy amin'ny sokajy mety hampidi-doza mihoatra ny vokatra roa misesy. Ny herisetra amin'ny sokajy ambany dia ambany no tokony hofidina rehefa hifehezana ny sarotra Ny fifangaroan-kery na ny filaharana famonoana herisetra izay manana fomba fiasa samihafa dia matetika no antsoina hoe singa iray amin'ny paikady fitantanana fanoherana. Raha voafantina am-pahendrena ireo singa mifangaro ao anaty tanky na fampiharana mirindra dia mety hanampy be ity paikady ity amin'ny fanemorana ny fivoaran'ny fanoherana. Mampalahelo fa maro amin'ireo fepetra takiana amin'ny fangaro tanky na fampiharana mirindra mba hisorohana ny fanoherana no tsy mahafeno ireo fifangaroana fampiasa matetika. Mba hahomby indrindra amin'ny fisorohana ny fivoaran'ny fanoherana, ny herisetra dia ampiasaina mifandimby na amin'ny fifangaroan'ny tanky dia tokony hanana fifehezana mitovy ary tokony hanana fikirizana mitovy amin'izany.
Ampidiro araka izay azo atao ny fomba fifehezana tsy simika toy ny fambolena ao anaty programa fitantanana ahi-dratsy. Tazomy ny firaketana tsara momba ny fampiasana herisetra amin'ny vala isan-tsokajiny hahitana ny ho avy.
Mikaroka ahi-dratsy tsy mahatohitra herisetra. Ny ankamaroan'ny tsy fahombiazan'ny fanaraha-maso ahidratsy dia tsy vokatry ny fanoherana ny herisetra. Alohan'ny hiheverana fa mahatohitra ny ahi-dratsy velona aorian'ny fampiharana herisetra dia esory ireo antony hafa mety hiteraka tsy fifehezana. Ny antony mahatonga ny tsy fahombiazan'ny fanaraha-maso ny ahidratsy dia misy ny zavatra toy ny tsy fampiasa (toa ny tahan'ny tsy fahampiana, ny fandrakofana tsy dia tsara, ny fampidirana tsy mahomby, na ny tsy fisian'ny adjuvant); toe-piainana tsy manara-penitra ho an'ny hetsika famonoana ahitra tsara; fotoana tsy mety amin'ny fampiharana herisetra (indrindra ny fampiharana herisetra aorian'ny famoahana herinaratra aorian'ny ahidratsy dia lehibe loatra ka tsy voafehy tsara); ary ny tsimparifary mipoitra aorian'ny fampiharana herisetra famerenanana vetivety.
Raha vantany vao nesorina ireo antony hafa mety hiteraka fifehezana tsy dia tsara loatra, ity manaraka ity dia mety hanondro ny fisian'ny biotype azo antoka fanoherana ny herisetra: (1) ny karazan-javamaniry rehetra fehin'ny herisetra dia tsy voafehy tsara; (2) ireo zavamaniry salama ao amin'ilay karazany resahina dia ampangaroharo an'ireo zavamaniry mitovy amin'ilay namonoana; (3) ny karazan-javamaniry tsy voafehy dia mora tohina amin'ny famonoana poizina resahina; ary (4) ny saha dia manana tantaram-piainana amin'ny fampiasana betsaka ny famonoana ahitra apetraka amin'ny famonoana na famonoana poizina miaraka amina fomba fiasa mitovy amin'izany. Raha ahiahiana ny fanoherana dia atsaharo avy hatrany ny fampiasana ilay famonoana herisetra resahina ao ary ireo herisetra hafa manana ny fomba fiasa mitovy amin'izany.